IPLANGA YEPLANGA ENESITAMPU SEPATIO EPHATHEKAYO - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iplanga yeplanga enesitampu sePatio ephathekayo
Iplanga yeplanga enesitampu sePatio ephathekayo
Nasi isikhokelo sethu kwiplanga leplanga eligximfiziweyo ipatio yekhonkrithi kubandakanya nokuba yintoni, indlela yokugxotha iiplanga zekhonkrithi kunye neentlobo zezitampu oza kuzisebenzisa. Ukongeza ipatio ekhayeni lakho kutyalo-mali oluhle. Ayaneli nje ukwandisa indawo yakho yokuhlala kwaye ikuvumela ukuba ukonwabele ngaphandle, ipatio enomtsalane neyenziwe kakuhle inokongeza ixabiso ekhayeni lakho xa kufika ixesha lokuthengisa.
Ukufumana okuninzi kwipatio yakho, jonga isisombululo esilula, esinexabiso elinomtsalane ngakumbi kunesisekelo esisisiseko sekhonkrithi.
Ikhonkrithi enesitampu ilingana kakuhle netyala. Qesha ikontraka ekhonkrithi yokuhombisa, kwaye le projekthi inokugqitywa kwimpelaveki. Iziphumo zokugqibela ezinesitayile kunye nesiqhelo, jonga iplanga ipatio yekhonkrithi enesitampu .
Yintoni Iplanga yeplanga eSitampu seKhonkrithi
Uziqinisa njani iiPlanga zeKhonkrithi
Khetha uhlobo lwekhonkrithi oza kulusebenzisa
Inkqubo yokunyathela eziphathekayo
Iplanga lePlanga leSitampu seVidiyo ephathekayo yePatio:
Ukufaka isicelo seSealer kwiKhonkrithi enesitampu
Izitampu zeKhonkrithi yePlanga
Iplanga leplanga eligreyithiweyo ipatio yekhonkrithi iqala njengebhanki yekhonkrithi. Xa ikhonkrithi inyangeka kancinci (iqina), imethi yerabha ibekwa phantsi kuyo.
Imethi ine-design pre-cut kwicala elibekwe kwikhonkrithi. Xa uxinzelelo lusetyenziswa ngaphezulu kweemethi, uyilo lucinezelwe (lugximfizwe) kwikhonkrithi.
Kwimeko yekhonkrithi yesitampu somthi, ipateni kumatshini werabha yenzelwe ukuphindaphinda ukubonakala kweeplanga.
Ngelixa ukuqesha ingcali kunokufumana iziphumo ezilungileyo, le yiprojekthi enokugqitywa yi-DIYer efanelekileyo yekhonkrithi. Uya kudinga ukutyala imali kwiseti epheleleyo yezitampu zeplanga.
Okokuqala, khetha ubungakanani kunye nepateni yezitampu zakho zekhonkrithi. Ukukunceda ukukhokela uphando lwakho, yazi ukuba ngamanye amaxesha kuthiwa 'ziifom'.
Emva koko, thatha isigqibo malunga nobungakanani bebonke kwikhonkrithi yakho. Ikhonkrithi inamacandelo amabini aphambili; ewonke
Umdibaniso ligama elinomdla kuyo nayiphi na into enezinto ezinje ngegrabile okanye ilitye elityumkileyo. Ukuncamathelisa isamente kwenziwa ngokongeza amanzi 'kwizinto zesamente'. Kwiimeko ezininzi, lo ngumxube welitye lekalika nodongwe. Ipeyinti uncamathelisa izinto ezihlanganisiweyo kwaye uyazibopha kunye.
Ukuncamathelisa isamente kuyancipha ngexesha lenkqubo yokuqinisa. Ukuba umxube owusebenzisileyo unentabalala yokuncamathisela kwaye awonelanga ngokudibeneyo, oku kuncipha kuya kubangela iintanda kwiprojekthi egqityiweyo. Ukuba usebenzisa i-aggregate kakhulu okanye ubungakanani be-aggregate bukhulu kakhulu, isitampu asiyi kusebenza.
Iingcali ezahlukeneyo zinezimvo ezahlukileyo kumyinge olungileyo wokudityaniswa kwesamente yokuncamathelisa ikhonkrithi. Isitampu esinoyilo olunzulu siya kusebenza ngcono ngokudityaniswa kwe-½ ukuya kwi-¾ ye-intshi ubukhulu. Bona Okuninzi kutyhilwe uyilo lwepatio ehlanganisiweyo Apha.
Ngezona ziphumo zihle, hlangana nomthengisi-mxube olungeleyo kwindawo yakho. Abathengisi abalungele ukuxuba banamava abanzi ekulungiseleleni ezona zixhobo zilungileyo zomsebenzi. Chaza iimfuno zakho kwaye uthathe iingcebiso zabo.
Ukuba ufaka umbala wekhonkrithi, umbala kufuneka wongezwe emanzini ngaphambi kokuba kungeniswe isamente kunye nomdibaniso. Gcina umkhondo ngononophelo wobungakanani bombala owongezayo. Umlinganiso kufuneka ungqinelane kwiibhetshi ezininzi.
ilokhwe yomtshato amaxabiso acocekileyo owomileyo
Ifestile yexesha lokunyathela ayinamda, ke qiniseka ukuba uthulula kuphela ikhonkrithi eninzi njengoko ungasitampu ngaphambi kokuba yome.
Iingcali zincomela ngaphezulu kweeyadi zesikwere ezintlanu okanye ezintandathu ngexesha, ngaphantsi ukuba eli lixesha lokuqala usebenzisa izitampu zekhonkrithi. Musa ukongeza amanzi kwikhonkrithi xa sele uqalile ukugalela. Oku kuya kungxenga umbala wekhonkrithi kwaye kukunike imveliso enemibala engalinganiyo.
Xa ikhonkrithi ixutywe, yagalelwa, thatha ikhefu iiyure ezimbalwa. Ukuba ipatio ikhanya ngokuthe ngqo elangeni okanye umoya uphezulu, jonga emva kwiyure nje enye.
Ukuqinisekisa ukuba ikhonkrithi yakho ikulungele ukufakwa isitampu, beka isandla sakho ngobunono emhlabeni ngaphandle kokucinezela. Xa ususa isandla sakho, ukuba kukho isanti okanye into enamathele kuyo, ikhonkrithi ayikakulungeli ukwamkela ukunyathela.
Ukuba uzama ukustampu ngeli nqanaba, uncamathiselo lwekhonkrithi luya kufuduswa endaweni yokubumba, likushiye ngephethini engacacanga kunye nokwakha okugqithileyo kumacala endawo enesitampu.
Xa ikhonkrithi sele ikulungele, sebenzisa ulusu lokuguda okanye umatshini oguqulweyo ukumisela imiphetho yesiphelo esifanayo Ipatio yekhonkrithi igqityiwe Apha.
Izikhumba zolusu azinayo iiseams - ziya kugqithisa ngengqolowa yeenkuni ngaphandle kokuzahlula zibe ngamaplanga. Nje ukuba imiphetho yakho yenziwe ngombala, qala ukubeka phantsi imethi kwipateni oyikhethileyo. Kunokuba luncedo ukubala ngasemva kweemethi ukuze ukwazi ukuzibeka ngokukhawuleza nangokuchanekileyo.
Qalisa ukunyathela kwindawo enye oqale kuyo ukugalela, usebenza kwimiqolo kwiPatio. Umqolo wokuqala kufuneka ubekwe ngokuthe tye - sebenzisa umtya njengesikhokelo ukuba kukho imfuneko - okanye ipateni iphela iyakuba off-kilter.
Ngalo lonke ixesha ubeka isitampu, cinezela kwikhonkrithi ngokuhamba kuzo. Isixhobo esiphazamisayo esiphathwayo sinokusetyenziselwa ukuqinisekisa ukuba ukugubungela kuyafezekiswa. Beka umqolo olandelayo, kwaye ungene kuwo. Ngelixa uthintela umqolo wesibini, umncedisi unokuphakamisa ngononophelo iimethi zerabha kumqolo wokuqala kwaye uzibeke kumqolo omtsha, wesithathu. Phinda le nkqubo de yonke ikhonkrithi ifakwe isitampu.
Xa ikhonkrithi inyange, faka isitywina sokungena emanzini. Yongeza isongezo esinganyangekiyo nesiliphu ukuthintela indawo ethe tyaba emva kwemvula. Ikhonkrithi kufuneka ithengiswe rhoqo emva kweminyaka emithathu ukuya kwemine.
Ufuna ukuba isitywina sigqitywe ngexesha lokufaka idyasi entsha. Ukufaka isicelo sokutywina unyaka nonyaka kuyangaphezulu, kwaye kunokubangela ukubonakala kwamafu kumgangatho wepati yakho.
Ububanzi beplanga obuqhelekileyo zii-intshi ezintathu, ii-intshi ezi-6 kunye nee-intshi ezi-12. Ngaphezulu iiplanga zikwakhona ukulingisa inkangeleko yoovimba abadala okanye iibhlorho; ezi zii-intshi ezili-16 ububanzi.
Ukujonga iplanga lomthi, uya kudinga iseti epheleleyo yezitampu. Oku kuhlala kubandakanya iiplanga ezimbini ezilinganisa iinyawo ezintandathu ubude, kunye neeplanga ezintathu ezincinci, ukulinganisa inye, zimbini, kunye neenyawo ezintathu. Oku kuya kubiza malunga ne- $ 1,000 ukuba ukhetha ukuthenga iseti entsha kraca, utyalo-mali oluninzi.
Uyakufuna kwakhona ulusu lokuthumela imiyalezo, olunokufikelela kwi- $ 600. Ngethamsanqa, izitampu zinokuphinda zisebenze, ke unokukwazi ukuthatha iseti yesibini esekwe komnye onomdla we-DIY. Unokucwangcisa kwakhona ekuthengiseni iiplanga xa ugqibezela iprojekthi.
Olunye ukhetho olunomdla 'ngumthi wokugqibela wokutya okuziinkozo' istampu. Ukuphelisa ukutya okuziinkozo yipateni ethi ibekho xa iiplanga eziveliswe zezi zitampu zifutshane kakhulu, kuba zenzelwe ukuphinda-phinda iziqwenga zomthi ezisikwe tye, kuwo onke amakhonkco omthi. Ezi zitampu zifutshane kakhulu-zihlala malunga nee-intshi ezili-12 ubude.
Ukufumana ezinye izimvo jonga igalari yethu ye iintlobo ezahlukeneyo zeepatio Apha.
ukuhonjiswa kweentyatyambo kwinqanaba lomtshato
imiphezulu yeetafile lenyengane eluhlaza
thanda iikowuti kwintombi yam
Ingoma yelizwe malunga notata nentombi yabo ikhula
ezihlekisayo unyaka omnye iikowuti
ilokhwe yomtshato ebomvu kaDavid